Ihe mgbochi: Gini bu SLL
SSL na-anọchite anya Secure Sockets Layer. Ọ na-ada ụda ntanetị, ọ dịkwa mma ịtụgharị uche na ya n'ihi na nkà na ụzụ dị n'azụ ya bụ nke ahụ kpọmkwem. Otú ọ dị, echiche dị ya gburugburu dị mfe. Ọ na-arụ ọrụ site na ichebe data maka ndị ahịa na-aga na ebe nrụọrụ weebụ. Ebe ọ bụ na data na-agafe na ịntanetị na ihe nkesa onye nwe, ọ dịghị onye na-agwa onye jidere ya mgbe ọ na-aga - tipps für umzug. Mgbe SSL dị na egwu, ọ na-ezipụ data niile ka ọ bụrụ naanị ihe nkesa nke onye na-elekọta ya na ihe nchọgharị onye ọrụ nwere ike ịgụ ya.
Ryan Johnson, onye isi ahịa ahịa nke Semalt , na-ekwu na otu n'ime ihe ndị mere SSL ji dị mkpa bụ na ọ dị mfe ịhapụ data na ịntanetị. A na-akpọ ọgụ dị otú ahụ ọgụ nke mmadụ. Nnyocha egosiwo na ọ dị nnọọ mfe maka ndị omempụ ma ọ bụ ndị nwere obi ọjọọ iji zipu okporo ụzọ weebụ. Ha nwere ike igbochi ihe ọ bụla site na nkọwa kaadị akwụmụgwọ na ihe ọmụma edepụtara n'ụdị nke kọntaktị.
N'ikwu eziokwu, ọtụtụ weebụsaịtị ndị na-emeso ozi siri ike dị na mbụ ejiwo nkà na ụzụ SSL. Ndị a bụ ndị na-eji kaadị akwụmụgwọ hazie ihe ọmụma, si otú ahụ tinye ihe ọmụma nke ndị ahịa n'ihe ize ndụ. O kwesiri iburu ebe ndi mmadu choro inweta ebe ha no. Ọ bụrụ na ọ nweghị teknụzụ SSL, ha kwesịrị ịtụle ịnweta ya ozugbo. Ọ dịkwa mkpa itinye akwụkwọ ikikere SSL ma ọ bụrụ na saịtị ahụ adịghị edozi ozi kaadị akwụmụgwọ. Enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a, gụnyere usoro nke saịtị Google na-ejikọta na SSL.
Google Chrome na SSL
Otu n'ime ihe nchọgharị kachasị ewu ewu, taa bụ Google Chrome..Ná mmalite afọ 2017, ihe nchọgharị ahụ malitere igosi saịtị na SSL nzuzo dị iche iche. Ewezuga igosi mgbachi na igbe adreesị weebụ, ọ ga-ekwe omume ugbu a ka ndị ọrụ pịa ya iji lee ozi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na saịtị anaghị echebe ya, ọ na-enye ịdọ aka ná ntị "Ịnweghị Ịnọ ná Ntụkwasị Obi" na ọ nwere ike ibu onye ọbịa ahụ ma ọ bụrụ na ha anọgide na-eme nchọgharị n'enweghị nchebe. Ọ metụtara weebụsaịtị ọ bụla nakọtara okwuntughe ma ọ bụ ozi ego ọ bụla. Ọ bụ atụmatụ nke Google iji mee ka ịdọ aka ná ntị a hụkwuo ọbụna na ibe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ibe weebụ enweghị SSL, mgbe ahụ, Chrome ga-agwa ndị ọbịa na saịtị ahụ adịghị enwe nchebe nke nwere ike ịlaghachi ọtụtụ ndị ọbịa. Ọ bụ iji mezuo nke a. Otú ọ dị, enwere uru ndị ọzọ site n'iji SSL:
Uru nke Iji SSL
Nkwenye nke Onye Ọrụ Ndị ọrụ ghọtara mkpa nke izo ya ezo nke mere na saịtị ahụ ga - eme ka obi sie gị ike ma ọ bụrụ na o nwere SSL.
SEO. SSL bụ ugbu a ọkwa dị na SEO
Ngwa ọsọ. Ọ na-eji usoro HTTP ọhụrụ ahụ pụtara na ọ nwere ibu ọrụ ngwa ngwa.
Nche. Ọ na - enyere aka ichekwa ozi onye nwe na onye ọrụ ya.
HTTPS dị oke ego. Ka Encrypt, na CloudFlare nyere ya n'efu na isi mmalite
HTTPS adịghị ngwa ngwa. Ebe nrụọrụ weebụ na-agba ọsọ ngwa ngwa na SSL
HTTPS bụ maka e-azụmahịa. Enwere ngbanwe izugbe iji jee ozi weebụ dum
IP a raara nye. Enweghị mkpa maka nke a n'agbanyeghị uru ndị sitere na IPs raara onwe ha nye
Free SSL obere ala karịa ndị akwụ ụgwọ. Ha na-enye otu ọkwa nchebe ma dị iche na ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ.
Mgbe Ị wụnye SSL akwụkwọ, chọpụta ma enwere njikọ ọ bụla agbajiri, nsogbu ọ bụla na-atụghị anya, 301 redirects, ọnụnọ nke Robots.txt, na ma Google Search Console bụ ọrụ. Site na ime nke a, ọ na-eme ka o doo anya na ibe niile dị na ike ịrụ ọrụ kachasị elu.